Ny vokatra vaovao any Shina - orinasa fanamboarana tsy fanesorana fanesorana | Shenghang
Vokatra vaovao — Ny asa fanamboarana tsy fanesorana
Manomboka amin'ny hariva ka hatramin'ny misasak'alina 26 desambra 2018, dia mandeha ny entana. Ny vokatra avy amin'ity kaopy ity dia tsy mitovy amin'ny teo alohany - ny tranokala fananganana tsy fanesorana, dia halefa any Soisa. Ao amin'ity boaty ity dia misy sakany am-polony, slotting ary karazana fahatapahana roa, mihoatra ny 2000.
Ny endrika fananganana tsy fanesorana dia vokatra vaovao an'ny orinasanay, dia famolavola vaovao ho an'ny fananganana form-work, tsotra ny fametrahana azy, tsotra ny famonjena ary ny fiarovana ny tontolo iainana, afa-tsy mihoatra ny 50% ny vidin'ny asa sy ny haingon-trano.
Ny fomba fametrahana Mgo tsy fanalana trano fananganana dia mitovy amin'ny modely fananganana mahazatra, fa ny fandidiana dia mora kokoa.
Ny tonon-taolana mifangaro, shiplap (L sisiny), fifandraisana tsara kokoa, fametrahana mora, tsy misy betonika, leakage.
Nahatratra ny A1 sy tsy voadotra ny famonoana afo, ity akora ity dia finamanana ny tontolo iainana: magnesium oxide, magnesium chloride, magnesium sulfate, perlite, nahita vovoka, vongan-bary. Ny ampahany notapahana dia azo averina mivantana ary tsy ho simba, indrindra ho an'ny tetikasa any ambanin'ny tany. Tsy mila fanesorana ny mampihena ny vidin'ny asa. Ary ireo tempolin'ny tranobe Mgo dia namboarina tamin'ny akora tsy organika fa tsy kitay, hampihena ny fahasimbana amin'ny tontolo voajanahary, arovy ny ala.
Ny velaran'ny tempolin'ny mgo dia mety ho masika mivantana, coating coins na wallpaper, sns. Afaka mitahiry ny vidin'ny asa sy ny vidin'ny entana.
Ity trano mgo tanteraka ity dia tsy mila fikojakojana, avo fanoherana.
Ka ny mgo non-fanalana trano modely no ho teknika vaovao fananganana ary hamboarina haingana kokoa ny fivoaran'ny fananganana.
Sheet plastika vita amin'ny plastika, Tady fandrefesana, Mpitety tafo fanala, Sheet vy voakorontana, Sampam-by vy vita amin'ny vy, Taratasy vita amin'ny famononam-bary any Galvalume,